Shivaraj Online | ९५ वर्षीया लीलादेवीको उबेलाको दशैं - Shivaraj Online ९५ वर्षीया लीलादेवीको उबेलाको दशैं - Shivaraj Online
९५ वर्षीया लीलादेवीको उबेलाको दशैं
दाङ घोराही-६ की ९५ वर्ष पुगेकी लीलादेवी पौडेलले के मात्र भोगिनन् ? चार युगजस्तो लामो जीवनमा उनले अनेक थोक देखिन् । आफ्नै सन्तानको चार पुस्ता अर्थात् नातिको नाति ‘खनाति’को मुख देखिन् ।
उनकै शब्दमा एउटै जीवनमा उनी दुई फेर बाँचिन् । भन्छिन्, ‘सम्झँदा जुनी फेरे जस्तो लाग्छ ।’ हिजो जहाँ अभाव र दुखैदुःख थियो । खुसी थिएन । आज जहाँ के छैन ? सबथोक छ । ‘आज त स्वर्ग हो । हिजो कम्तीको दुःख थियो ।’ उनी विगत सम्झन्छिन् ।
यहीबीच दशैं नजिकिँदो छ । लीलादेवी पौडेलले ९५ औं पटक दशैं मनाउँदैछिन् । सम्भवतः आफ्नो कालखण्डमा लामो जीवन बाँचेर, थुप्रै चाडपर्व मनाउनेमध्येकी उनी एक हुन् । स्मृतिमा रहेका आफूले ८० बढी मनाएको दशैं सम्झना खोजिन् । कति स्मृति ताजै छन्, धेरै भने धमिलिइसकेका । प्युठानको सल्लाबोट गाउँमा जन्मिएकी उनलाई केटाकेटी छँदा दशैंंमा निधारमा टीका थोपेको, गाई पैसा दक्षिणा पाएको उनलाई सम्झना छ । स्मृतिमा पुराना दशैंका याद ताजा भयो ।
दशैं जतिजति नजिकिँदै जान्थ्यो । गाउँमा रौनक उति बढ्थ्यो । दशैंको नजिकै गाउँमा सराय नाच नाच्थे । गाउँमा मेला लाग्थ्यो । ‘बाजा गाजा बजाएर सराय नाचेको हेर्न जान्थ्यौं’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा मेला लाग्थ्यो । ठाउँ-ठाउँमा चर्खेपिङ राखिन्थ्यो । हामी खेल्थ्यौं ।’ उ दशैमा बेला पिङ खेल्नु परम्परा जस्तै थियो । भन्छिन्, ‘पिङ खेल्दा पो दशैं आए जस्तो हुन्थ्यो । अहिले त पिङ देखिनै छोडे ।’
घर फर्काउने पर्व
वर्षौं छुटि्टएका आफन्तहरु एकै ठाउँमा जमघट हुन्थे । घर चलाउन, परिवार पाल्न भनेर काम गर्न भारत पुगेकाहरु दशैं सम्झिँएर घर फर्कन्थेँ । फर्कन नपाएकाहरू चिठ्ठीपत्रबाट खबर पठाउँथे ।
उस बेला फोन सम्पर्क नहुने । चिठ्ठीपत्र आउन समय लाग्ने । परदेश पुगेकाहरू परिवारदेखि वर्षौं बेखबर रहन्थे । दशैंमा जब तीनै परदेशी घर फर्कन्थे, माहोल भावविभोर हुन्थ्यो । तर त्योभन्दा धेरै उत्सवमय भइदिन्थ्यो । वर्षभरि परिवार र आफन्तसँग छुटि्टएकाहरूलाई जमघट गराउने, दुःखसुख साट्ने पर्व थियो, दशैं । ‘घर छाडेर कमाउन गएकाहरूलाई दशैंले घर फर्काउ’थ्यो’ उनले भनिन्, ‘वर्षदिनमा आफन्तसँग छुटि्टएकाहरू दशैं सम्झेर आफैँ मूल घरमा टीका थाप्न आइपुग्थे ।’
हिजो आफूले गाईपैसा दक्षिणा थापेकी उनले अहिले दुई सय रुपैयाँसम्म नातिपनातिलाई दक्षिणा दिन्छिन् । भन्छिन्, ‘अहिले पो दशैं महँगो भयो ।’
ऊबेला बजार थिएन । नुनतेल र कपडा किनमेल गर्न दाङको कोइलावास नाका पुग्नुपर्थ्यो कि त बुटवल । दशैं किनमेल गर्न यी दुई पश्चिम नेपालका बजार थिए । ‘पछिसम्म पनि हामीले बजार देख्न पाएनौं । दशैंमा नुनतेल र कपडा लिन बुबाआमा हिँडेरै कोइलावास नाकाको बजार पुग्नुहुन्थ्यो ।’ उनले भनिन् ।
त्यसमाथि अहिले जस्ता न बाटो घाटो थिए न गाडी मोटर । हप्तौं हिडेर बजार नुन तेल र लुगाफाटो किनेर र्फकन्थे । ‘बजार त धेरैपछि देख्न पाए’ उनले भनिन् ‘बजार भन्नु कस्तो हुन्छ भन्ने सपना जस्तै थियो ।’
कपडा लगाउन त्यही दशैं कुर्नुपर्ने । ‘नयाँ लुगा लगाउन दशैं कुर्थ्यौं, कपडा पाइने भयौ भनेर खुसी हुन्थ्यौं । दशैंमा किनेको कपडा वर्षभरि चल्थ्यो । कहिले त त्यही कपडाले दुईचार वर्ष धान्थ्यो । एउटै कपडाले धेरै वर्ष बिते ।’ अहिले सम्झँदा अचम्म लाग्छ उनलाई ।
बेसी चढ्दै र र्झदै
मान्यजनबाट टीका लगाउने क्रम दशैंको पाँचौं दिनसम्म पनि नपुग्ने । ‘मोटर बाटो थिएन । बेसी झर्दै र चढ्दै आफन्त कहाँ टीका थाप्न पुग्थ्यौँ’ उनले भनिन् ‘दिनभर हिँड्दा पनि नपुगिने ।’
टीका लगाएर पाएको दक्षिणा आज सम्झन्छिन्, उनी । ऊबेला गाईपैसा खुब चल्थ्यो । ‘टीका लगाएर दक्षिणा गाईपैसा, कहिले ५० पैसासम्म पाइन्थ्यो’ उनले भनिन्, ‘कागजका पैसा नहुने, ढ्याक पैसा हुने । धेरै त तामाका ढ्याक हुन्थे । नोटका पैसा कस्तो हुन्थ्यो देख्न नपाइने ।’
अहिले समय फेरिएको छ । ती सबै ढाक्क पैसा हराएर गए । कागज पैसा जातकतै छन् तर ढाक्क पैसा देखिन छाडे ।
फेरि पैसा भएरमात्र पनि नहुने । पैसाले के गर्नुझैं हुन्थ्यो । ‘ऊबेला बजार हुँदैन’थे । टीका दक्षिणाबाट पाएको पैसा कहाँ गएर सक्नु । के खानु, के लाउनु हुन्थ्यो । पैसा भएर पो के गर्ने, पहाडमा पसल थिएनन् । अहिले जस्तो मिठाई नपाइने ।’ उनले सम्झना गरिन् ।
अहिले समय बद्लियो, रीतिथिति पनि पनि बद्लिँदै गएको छ । अहिले उनलाई दशैं पनि उति रमाइलो लाग्न छोड्यो । ‘सानो छँदा रमाइलो लाग्थ्यो । अब त जिउ रोगी भयो ।’
साभार – online khabar